Wararka - White Gaskets Polyethylene xumbo gas-xiran
Iskutallaabta unugga xiran ee xumbada polyetylenku had iyo jeer waxay noqon kartaa mid ka mid ah waxyaabaha ugu wanaagsan ee goomaha xumbo leh. Xumbada polyetylenku waxay leedahay laba qaybood oo waaweyn - kiimiko iskutallaabaysan oo polyetylen xumbo leh iyo irradiation xumbo iskutallaabaysan oo polyetylen ah. Ta ugu dambeysa ayaa ka wanaagsan oo si isdaba joog ah loogu adeegsadaa sida goomaha xumbo loogu talagalay suuqyada oo ay ku jiraan caafimaadka, aaladaha elektarooniga ah, baakadaha qurxinta, qaybaha gawaarida, iwm.
Siraha polyetylen xumbada iskutallaabta isku xidha ayaa leh waxqabad wanaagsan oo ku saabsan guryaha jireed.
Dusha sare ee raaxada leh jawi saaxiibtinimo leh
Cadaadiska Premium ee qoyaanka, cimilada iyo saliida
Nalalka kuleylka iyo acoustic-ka wanaagsan
Waxqabadka dheeraynta wanaagsan
Waxaa lagu heli karaa cufnaan ballaaran iyo midabbo
Qaab dhismeedka unug xiran ee nuugista biyaha hooseeya iyo uumiga u gudbinta.
Waxyaabaha gaaska polyetylen xumbo ka sameysan ee isku-xidha ayaa leh dabacsanaan kale. Kala duwan oo dhumucdiisuna waxaa laga heli karaa ka 0.08 mm in 8 mm. Dhumucda kale waxaa laga beddeli karaa habka dahaarka xumbo. Sidoo kale cufnaanta waxay u dhaxeysaa 28 kg / m³ ilaa 300 kg / m³. Midabada xumbada caadiga ah waa caddaan iyo madow. Midabada kale waa la habeyn karaa oo ay ku jiraan buluug, cagaar, casaan, oranji iyo wixii la mid ah.
Dacwada Macaamiisha - Codsiga Badeecada Xumbo
Halkan waxaa ah nirigta xarkaha polyetylen ee xarkaha iskutallaabta ah ee aan u soo saarnay suuqdeena gudaha.
macmiil Waxay u isticmaali doonaan qalabkan goomaha xumbo ee 'PE' sida barkin wadajirka ah ee qaybaha baabuurtooda. Qalabka goyska polyetylen-ka ee iskutallaabta ah wuxuu u shaqeeyaa sidii qeyb barkin ah sidoo kale saliida iyo iska caabbinta shidaalka. Awoodda dheeraynta ee wanaagsan awgeed, waxay si fiican u shaqeeyaan marka qaybaha mootadu shaqeynayaan.
Sidaan u Sameyno Goomahan Xumbo
Waxyaabaha loogu talagalay goomahan xumbada leh waa shucaaca xumbada polyetylenka iskutallaabta leh oo leh saamiga ballaarinta xumbada 15 jeer iyo 65 kg / m³ cufnaanta. Cabbirka goomaantu waa 130 mm x 98 mm x 1 mm leh goynta dhimista caadada.
1) sheyga xiran polyetylen xumbo gaaska Marka hore waxaan ubaahanahay inaan ku xaqiijino macaamilka sawirada CAD wax soo saarka. Badeecada CAD sawiradeeda ayaa kafiican in ay bixiyaan injineerada macaamiisha. Dhinaca kale, haddii macaamilku ka maqan yahay taageerada naqshadeynta CAD, waxaan ku sameyn karnaa qeybtaas qaabeynta injineernimada alaabada macaamiisha.
2) Ka dib markaan xaqiijino sawirka CAD ee goomaha xumbo, waxaan sameyn doonaa birta caaryada dhimaysa sida ku cad sawirada la xaqiijiyay. Marka caaryada goynta dhinta ay diyaar noqdaan, shaqaalaheena warshadu waxay diyaarin doonaan wax soosaarka tirada badan.
3) Marka laga hadlayo been-abuurka dhabta ah ee walxaha xarkaha xumbada, waxaan u baahanahay inaan fulino habka wax soo saarka hoose:
Mashiinka xumbada qaaska ah
Xumbada asalka ah ee polyetylen waa nooc ka mid ah waxyaabaha goomaha xumbada laga soo saaray. Waxay ku soo baxaan duudduuban oo aan ku jirin xaashida, shaqaalaha warshaddeennu waxay u baahan doonaan inay adeegsadaan mashiinnadayada miinshaarta toosan si ay ugu gooyaan go'yaal. Kuwani go'yaal xumbo polyetylen la gooyey waa inay ahaadaan ugu yaraan isla cabirka balaastiga goynta biraha ama ka weyn.
Dheellitir dhinta gooyaa oo rakibi caaryada goynta dhinta si aad u wanaajiso saxnaanta goynta
Kahor soosaarka dhabta ah, injineeradeena wax soosaarka waa inay si taxaddar leh uxiraan gaaska unugyada polyetylen xumbo gasketskareeyaan caaryada goysa dhinta oo sifiican uga dhigta mashiinada goynta dhinta. Nidaamkan tijaabinta caaryada waxay qaadan doontaa waqti lumis ka badan inta macaamilku sida caadiga ah u maleeyay. Sida natiijada goynta saxda ah, waxaan u isticmaali doonaa qayb ka mid ah walxaha xumbada si loo hubiyo in caaryada biraha ay si fiican u rakiban yihiin. Taas ka dib, wax soo saarka ballaaran ayaa loo oggolaan karaa inuu tago.
4) Qaybta ugu dambeysa ee aan ubaahanahay inaan sameyno waa xirxirida caadooyinka alaabooyinka xumbada ee dhammaaday kahor rarka. Waxaan u xirxiraynaa goomaha xumbo caado u ah gaadiid wanaagsan. Baakadaha gaarka ah sida sanduuqa waraaqda daabacan iyo bacaha poly ayaa nalaga heli karaa iyadoo kuxiran baahida macaamiisha.
Mashruucan balaastigga ah ee loo yaqaan 'Polyethylene foamkets project' ayaa hoosta looga baahan yahay